Mapato Ari Muhurumende yeMubatanidzwa Otadza Kuwirirana Panyaya yeSarudzo
Mapato maviri eMDC, anoti inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai pamwe neinotungamirirwa naVaWelshman Ncube ati akagadzirira kupinda musarudzo chero nguva, ndokunge chete patanga pazadziswa zvakabvumiranwa muchibvumirano cheGPA.
MDC yaVaTsvangirai yaburitsa gwaro rinoti inoda kutanga yaona zvisungo zvevana veZimbabwe, zveSADC pamwe nezveAfrican Union zvekuti patange paumbwa hwaro hwesarudzo kana kuti roadmap zvatevedzerwa, pozoti potaurwa nezvesarudzo.
Mashoko emapato aya anotevera chisungo chakaitwa nedare repamusoro kana kuti Politiburo yeZanu PF neChitatu chekuti sarudzo dziitwe gore rino kana bumbiro remitemo idzva riri kunyorwa richinge rangopera.
MDC-T yati harisi basa reZanu PF rekushara nguva inofanirwa kuitwa sarudzo, risina kuwirirana nemamwe mapato ari muhurumende yemubatanidzwa, sezvinodiwa nechibvumirano cheGPA.
Mashoko aya atsinzirwawo nemutauriri weMDC yaVaNcube, VaNhlanhla Dube, avo vati Zanu PF haitauri yakamirira vana veZimbabwe.
Muyananisi uye vari mutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, vakatiwo panofanirwa kutanga pagadzirwa hwaro hwesarudzo pasati paitwa sarudzo munyika.
Nyaya yekuti sarudzo dziri kuitwa here gore rino kana kuti kwete inyaya inonzi yava kuvhiringa misoro yevana veZimbabwe, sezvo vasisaziva chokwadi chaicho.
Mazuva apera vamwe mubato reZanu PF vaiti sarudzo dzichaitwa mugore ra2013, inove nguva iri kunziwo nemapato eMDC ari maviri ndiyo nguva inofanirwa kuitwa sarudzo mushure mehwaro hwesarudzo, pamwe nebumbiro idzva remitemo yenyika.
Asi kushanduka kwoitwa neZanu PF zvakare panyaya iyi kwavakuita kuita kuti vamwe vafunge kuti pane kuhwandirana kuripo pakati pemapato ari muhurumende.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira, VaCharles Mangongera vaudza Studio 7 kusaimba rwiyo rwumwe chete kwoitika muZanu PF chiratidzo chekuti hamuchina kudhonzera pamwe mubato iri.
VaLivingstone Dzikira, avo vanoongororawo zvematongerwo enyika vakazvimirira, vatiwo nyaya yekuti sarudzo dzichaitwa riini ngaimirirwe kana musangano weSADC uri kutarisirwa munguva pfupi inotevera watanga waitwa.
Hurukuro naVaCharles Mangongera pamwe naVaLivingstone Dzikira